Manchester United oo heysata Dhaawaca Lix Ciyaartoy ka hor kulanka Newcastle United | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Manchester United oo heysata Dhaawaca Lix Ciyaartoy ka hor kulanka Newcastle United
Manchester United oo heysata Dhaawaca Lix Ciyaartoy ka hor kulanka Newcastle United
Manchester United ayaa ka walaacsan dhaawacyada lix ka mid ah kooxdeeda ka hor ciyaarta Newcastle United ay Sabtida ku martigelin doonaan garoonka Old Trafford, taas oo la filayo in xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo uu qayb ka noqdo.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayay walaac ku hayaan dhaawacyada lix ka mid ah ciyaartoydiisa oo qaarkood muhiim yihiin, kuwaas oo iskugu jira laacibiin hore dhaawac u qabay iyo kuwo waxyeello kasoo gaadhay kulamadii qaramada ee toddobaadkan iyo usbuucii hore.
Marcus Rashford oo kasoo kabanaya qalliin lagaga sameeyey garabka ayaa ugu horreeya ciyaartoyda aan la hubin inay taam u noqonayaan kulankan, iyadoo uu laacibkani maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa garoonka tababarka oo uu ciyaartoyda kale la qaadanayay
23 jirkan ayaa la sheegay in ciyaartu ay waqti hore ku tahay oo uu u baahan yahay inuu illaa bisha October ka maqnaado garoomada, laakiin kooxdu waqti kama dambays ah umay qabanin soo laabashadiisa.
Jadon Sancho oo laga saaray liiska xulka qaranka England ee kulamadii usbuucan kaddib dhaawac kasoo gaadhay tababarka ayaa ka mid ah ciyaartoyda shakiga la gelinayo inay qayb ka noqon doonaan.
Manchester United ayaa war-saxaafadeed ay kasoo saartay dhaawaca Sancho waxay ku sheegtay inay qiimaynayso xaaladdiisa iyo waqtiga suurtogalka ah ee uu soo laaban doono, waxaanay niyad-samaan ka bixisay inay dib u heli doonaan Sabtida.
Scott McTominay oo lagu sameeyey qalliin ayaa isaguna seegi doona kulanka, laakiin Manchester United oo aad u tabtay awooddiisii ciyaareed intii uu xilli ciyaareedku socday ayaa waxay rajo ka qabtaa inuu qayb ka noqon karo safka Sabtida ee Newcaslte.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa hore u sheegay, in Alex Telles oo bishii July dhaawacmay uu maqnaanayo dhamaan bisha August, laakiin hadda waxa lagu jiraa September, xaaladdiisana waa la qiimaynayaa iyadoo aan laxaqiijin waqti soo laabasho.
Dean Henderson oo uu dhibaateeyey fayraska Korona uu ku dhacay ayaa hadda ladnaan dareemaya, waxaana in caafimaadkiisu soo wanaagsanaanayo sheegay Ole Gunnar Solskjaer. Laacibkan ayaa tababarka kusoo noqday laakiin waxa la filayaa in aanu taam noqon jidh ahaan,shabaqana uu sii ilaaliyo David de Gea.
Phil Jones oo muddo 18 bilood ah garoomada ka maqnaa laakiin kulan saaxiibtinimo oo bishii hore ahaa ciyaaray ayaa isagana la sheegay in aanu diyaar u ahayn inkasta oo uu dareemayo in uu taagan yahay xaalad fiican.
Si kastaba, Cristiano Ronaldo ayaa la filayaa inuu ciyaartaas taam kusoo bilowdo, isla markaana ay Old Trafford kusoo dhoweeyaan in ka badan 70,000 qof.
Previous articleXiisada Farmaajo iyo Rooble: Rooble oo loo diray fariin culus
Next articleGolaha abwaanada oo war kasoo saaray xiisadda Villa Soomaaliya